Sarimihetsika – « Fahavalo »: haseho ny Malagasy ny tantara | NewsMada
Sarimihetsika – « Fahavalo »: haseho ny Malagasy ny tantara
“Fahavalo, Madagascar 1947”, horonantsary fanadihadiana notontosain’i Marie-Clémence Andriamonta-Paes. Raha fintinina, ahitana fijoroana vavolombelona, mikasika ny zava-nitranga tamin’ny 1947, fotoana nampamaivay ny fanoherana ny fanjanahantany. “Fahavalo”, io ny niantsoana ireo sahy nijoro nanohitra ny Frantsay, mpanjanaka, tamin’izany fotoana izany.
Azo lazaina ho efa manana ny lazany ity horonantsary ity, raha ny toerana sy hetsika maro efa nandefasana azy sy ny fankasitrahana efa azony. Anisan’izany ny tany amin’ny “Festival des films du monde” any Canada, nahazoany ny loka fahatelo. Efa naseho tamina « festivals » maro sy hetsika miompana amin’ny sarimihetsika ny « Fahavalo » ary betsaka ny fanamarihana mikasika azy.
Ankehitriny, sambany ho hitan’ny eto Madagasikara ity horonantsary mikasika ny tantaran’ny Malagasy ity. Hanombohana izany ny any Fianarantsoa, rahampitso sy amin’ny asabotsy izao. Avy eo, hoentina any Ambositra sy Toliara ary eto Antananarivo. Maromaro ireo manome tanana amin’ny fanatanterahana ity fitetezam-paritra miaraka amin’ny horonantsary “Fahavavlo” ity, toy ny fikambanana Hetsika Madagascar, ny Alliances françaises (Toliara sy Ambositra), ny Vakok’Arts Trano, ny Mémoires de Madagascar, sns.